China COLOR PVC VINYL fekitari uye vagadziri | Shawei
Item Kodhi: AD-V025
Zita: Ruvara PVC Vinyl
Kusanganiswa: 100um PVC + 140g kuburitsa bepa
Kushanda: Chiedza Bhokisi, hwindo
Inogona kushandiswa kucheka tsamba uye mifananidzo, zvakare inokodzera yekunze neyekunze kushongedza, masaini mamaki.
Firimu Ukobvu 0.1mm
Sunungura bepa 120gsm, 140gsm
Saizi Yakagadziriswa diki saizi
Glue Rudzi Permanent
Kunogara Kunze 1-2yeas, 3-5years
Pasuru Standard Export katoni
Zvimiro 1.Can ingashandiswa pamotokari, Kuvaka, bhazi, metro, mota hwindo kana kushongedza kwegirazi regirazi; 2. Nyore kucheka chero tsamba, logo uye yakasarudzika chimiro graphic nekucheka plotter 3.Clear tile glue pasina glue inoramba iri dambudziko;
uye nharaunda munyika.
Kushanda 1. Inoshandiswa zvakanyanya indoor / yekunze chiratidzo2. Yechinguvana yekusimudzira uye poindi yekutengesa kushambadzira.
3. Zvigadzirwa zvemiti.
4. Acrylic jira, bhokisi rakareruka, kucheka komputa.5. Pamusoro pekushongedza nemavara mavara uye mifananidzo.
Makara Kucheka Vinyl Giredhi A
1.facefilm: 100 micron PVC firimu
2.transparent yechigarire acrylic yakavakirwa glue
Makara Kucheka Vinyl Giredhi B
1.facefilm: 80 micron PVC firimu
1. Yega Yekunamatira chinamirwa
2. Hupenyu hwakareba hwekushandisa kwemukati nekunze
3. Glossy kana matte kupedza anowanikwa
4. Mavara mazhinji esarudzo
5. Nyore kutema chero tsamba, logo kana yakakosha chimiro nekucheka kuronga
Pashure: KORORI PVC VINYL-ECONOMIC
Zvadaro: CHAKAjeka STATIC CING STICKER
SUPER KUPENYA PAMUSORO PVC VINYL-CHINODZORA
CHIRATIDZO PVC VINYL
CHAKAjeka STATIC CING STICKER
KORORI PVC VINYL-ECONOMIC